किन हुन्छ जाडोयाममा डिप्रेसन ?- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
किन हुन्छ जाडोयाममा डिप्रेसन ?
पुस २०, २०७४ डा. ललित कुमार मिश्र
जाडो मौसममा प्राय गरि दिउँसो सुर्यको प्रकाश (घाम) कमै पाईन्छ अर्थात घामै लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो मस्तिष्कमा रहेको 'सेरोटोनिन' नामक रसायनिक तत्व प्रभावित हुन्छ। जसले गर्दा हाम्रो मुड बिनाकारण त्यसै जतिखेर पनि खराव नै रहन्छ। यसरी बराबर मुडअफ भइरहने अवस्थाले हामीलाई अवसादडिप्रेसनको शिकार बनाउन सक्छ।
यस रोगको बारेमा चिकित्सा विज्ञानमा सर्वप्रथम सन १९८० को दशकबाट देखिएको हो। यसभन्दा अगाडि पनि कयौं चिकित्सक तथा बिरामीहरुमा यसको जानकारी थियो। जाडोको मौसम सुरु हुने बितिक्कै व्यक्तिको स्वभावमा बदलाव देखिन सुरु भैई हाल्थ्यो। यस तथ्यको बर्णन पाँचौ शदी ईशापुर्वमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका जन्मदाता 'हिप्पोक्रेटसका केहि आलेखहरुमा पनि भेटिन्छ। सिजनल एफेक्टिव डिसाडर्र (सैड)लाई विन्टर डिप्रेसन पनि भनिन्छ। विश्वमा कयौं यस्ता मुलुकहरु पनि छन्, जहाँ दिन लामो तथा घामको सर्वथा अभाव नै रहन्छ। त्यस्ता मुलुकहरुमा विन्टर डिप्रेसनका रोगीहरु भेटिनु एक आम समस्या हो। जस्तै नर्थ-नर्वे, रसियाको नर्थपोल, डेनमार्क, फिनलेन्ड, ग्रिनलेन्ड, स्विडेनमा वर्षको ६ महिना रात र ६ महिना दिन रहन्छ। त्यहाँ विन्टर डिप्रेसनका समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरु बढि भेटिन्छन्। यहि कारण होला कि त्यहाँ का मानिसहरुमा आत्महत्या गर्नेको सँख्या सवैभन्दा बढि देखिन्छ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७४ १७:५०
डीपीएलको दोस्रो संस्करण आउँदो चैत १७ गतेदेखि
पुस २०, २०७४ कान्तिपुर ंसंवाददाता
काठमाडौँ — धनगढी क्रिकेट लिगको (डीपीएल) को दोस्रो संस्करण आउँदो चैत १७ गतेदेखि सुरु हुने आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) ले जनाएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले खेलाडी दर्ता तथा अक्सनबारे जानकारी दिएको हो । प्रतियोगितामा ६ टोलीको सहभागिता जनाउनेछन् ।
अक्सनका लागि खेलाडी दर्ता बिहीबारदेखि सुरु भएको छ र दर्ता प्रक्रिया माघ २५ गतेसम्म चल्नेछ। खेलाडीको अक्सन फागुन ५ गते हुने आयोजकले जानकारी दियो। यसबाहेक प्रत्येक टोलीले दुई विदेशी खेलाडी राख्नुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ। ट्यालेन्ट हन्टमार्फत स्थानीय एक खेलाडीलाई पनि समेट्नु पर्नेछ।
प्रतियोगिताको विजेताले २५ लाख तथा उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। तेस्रो र चौथो हुने टोलीले क्रमश: ३ लाख र दुई लाख पाउनेछन्। प्रत्यक खेलको म्यान अफ द म्याचले १० हजार रुपैयाँ र म्यान अफ द सिरिजले टीभीएस अपाचे १८० सीसीको मोटरसाइकल पाउनेछन्। प्रतियोगिताको कुल अनुमानित बजेट करिब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेल धनगढीस्थित अञ्चल प्रहरी मैदानमा हुनेछ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७४ १७:१५
असुरक्षित गर्भपतन गराउने बढ्दै
दशैंको बेला फुड पोईजनिङको संभावना र बच्ने उपायहरु
पहाडमा तीन प्रकारका कालाजार देखिए
गुमेको ज्योति फर्कँदा
चुम्बन गर्दा पनि लाग्न सक्छ रोग